သောသီခို: ကရင်လက်နက်ကိုင် ချင်းချင်း ပြန်လည် ပစ်ခတ်မှု မဖြစ်ကြရန် တိုက်တွန်း
မောင်ချစ်သူ စကားကို ယုံတော့ ယုံ ခြင်ပါတယ်။ ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး ယုံမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း ယုံရမှာပေါ့
KNU_flagဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန် ကရင် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များက ဦးစီးပြီး ကရင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အချင်းချင်း ပြန်လည် ပစ်ခတ်မှု မဖြစ်ရန် ဂတိဂ၀တ် တောင်းသည့် ဆွေးနွေးပွဲ တရပ်ကို ယမာန်နေ့၌ ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းပွဲမြို့နယ်ရှိ ကေအန်ယူ တပ်မဟာ (၇)နယ်မြေတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
Posted by ဇင်ယော် at 9:18 AM
I am glad to hear. Hope they can meet and talk more about peace in the future. They have done enough arguing or fighting each other.Now it's time for peace.Here..You guys are leaders. I know you guys can do it. We all are proud of you..All of our Karen will always support you guys if you guys unit. I believe that 100%...Long live our leaders...
Saw Patrick said...
ပဏာမတွေ့ဆုံပွဲမှာပါဝင်တဲ့ လက်နှက်ကိုင်ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေထဲက အဒီက ကတိတည်ရမဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ BGF ခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်တယ်။စောဘဦးကြီးရဲ့ သိက္ခာနဲ့ ကရင်လူမျိုးတရပ်လုံးရော။ကရင်ပြည်နယ် အမှန်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလေးစားတယ်ဆိုယင်တော့ ဒီပဏာမဆွေးနွေးပွဲကနေတဆင့်ခိုင်မာတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကိုအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖေါ်သင့်ပါတယ်။ Unity is Strength and unbreakable. ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်နဲ့ ကရင်တမျိုးသားထုလုံးကို ကာကွယ်ဦးဆောင်ပေးရမဲ့အချိန်ရောက်ပြီလို့ထင်တာပဲ။
မင်းစိုးစံ(အဝေးရောက် ကရင်ဒုက္ခသည်တဦး) said...
အဓိက ကတိတည်ရမှာက ကရင်အဖွဲ့တွေအားလုံးဖြစ်ပါတယ်။
လက်ခုပ်ဆိုတာ တဘက်တီးလို့ အသံမထွက်နိုင်ပါဘူး။
စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှု စုပေါင်းတာဝန်ယူမှု ဆိုတာကို မေ့နေသမျှ
Unity is Strength and unbreakable. ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ဟာ
အင်မတန် ပြောလို့ကောင်းတဲ့ စကားစုပါ။